Iimephu zeWebhu zivuselela iimephu zembali- iGeofumadas
NgoJulayi, 2015 Iiphotography, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Mhlawumbi asisoze siphupha ukubona imephu yembali, iphakanyiswe kwiGoogle, ngoko sinokukwazi ukuba iminyaka eyi-300 eyadlulayo yindawo apho sikumi namhlanje.
Ubugcisa beemephu zewebhu buvumelekile. Nawe! ngayiphi indlela
Umzekelo woku imephu nostalgic of London, apho ke ziye zipapashwe kuphela imaphu 1746, kodwa kwakhona kusini na ukuba ziye zalandela indlela ukulingana iimephu cadastral ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini.
Kuyinto ngokuqinisekileyo umsebenzi engumzekelo, eziye zasetyenziswa ixesha imephu phakathi 1869 kunye 1890 abo mhlawumbi iphepha, eziye ngaske ngononophelo ukugcina inqanaba iinkcukacha ngelo xesha Yayibubuchule.
Ngenxa yoko, kunokwenzeka ukuba wenze izinto ezinje. Simangele ukuba indawo yiphi indawo yasedolophini ngoku ngenye imini iifama ezichazwe ngokucacileyo kwimizobo yakudala.
Ukudibanisa lo msebenzi, emva kokuskena, kuye kwafuneka benze umsebenzi wokudibanisa apho iimpazamo zomntu ngamnye ezifumaneka rhoqo kwiphepha ngalinye, ngaphezulu kungafumaneki. Sew akukho lula, kuba ixesha libangela ukuba amagqabi angonakali, ongeze kwizinto ezenzekayo xa umsebenzi udlula kwisikena.
Emva koko baye benza iqoqo lamakhulu amanqaku eyaziwayo kwintsimi, eyahlukana nganye kwiimephu.
A isixa esikhulu umsebenzi iimephu indawo ebanzi navuswa kunye nendlela abadala,, idala iingxaki ujikelezo georeference ukuzolula kangangokuba elinye icala yenza desacomode komnye, nkqu ngaphakathi sheet efanayo.
Ngenxa yalokhu, baye benza ukuchongwa kweeteksi zezitalato, ukuzalisa i-topology yenethiwekhi apho isalathiso singenziwa kumfanekiso ngendlela eyahlukileyo.
Ngaloo ndlela, usebenzisa indlela yokwenza umkhondo, xa ulula, imephu ibandakanywe ngokusondeleyo ngokungathi kunokwenzeka ukuba i-ortho-referenced map.
Ingxaki enomdla kuzo zonke iindawo esele zitshintshiwe, ezinjengeendawo zololiwe, apho kungenakwenzeka ukuba kubonwe amanqaku awaziwayo. Kule nto baphendukele kwindlela enzima yokuyiqonda ngokupheleleyo, bavelisa i-buffers kwi-axes yesitalato, bethathela ingqalelo ububanzi bendlela esetyenzisiweyo ngala maxesha. Kwaye oku baphumelele inguqu ethe ngqo ngakumbi.
Ukuqukumbela, umzekelo omkhulu wento enokwenziwa kusetyenziswa ubuchule obufumanekayo bobuchwephesha kunye nobugcisa. Kwaye ukuzisola okukhulu kwabo bathumele kwigumbi lokuphumla kwigumbi lokuhlambela ezo mephu zazakhiwe ngeendlela zokubonisa amandla, kodwa ixabiso lazo elidlulileyo esingakwaziyo ukulixabisa ... Okwangoku.
Khangela i-London Maps
Post edlulileyo«Ngaphambilini AutoCAD 2016. End of mvume elingunaphakade kubo.
Post Next Itekhnoloji yeNdlela yeTekhnoloji eSpain kunye nezoBunjineli boLuntu e-China kwiminyaka nje eyi-4Okulandelayo »
Impendulo enye "kwiimephu zeWebhu zivuselela iimephu zembali"
UCarlos Frahm uthi:
Ndifuna ukwazi iindlela ezintsha zokubonakalisa iimephu.